Igama elithi "Umhubhe" ku eyayivame, nasenkulumweni temlomo alisetshenziswa ngokuvamile kakhulu. Kodwa uma une ukubhala igama elithi, ngokuvamile nawu umbuzo, indlela ingabe kahle - a "Umhubhe" noma "umgodi." Ekupheleni yini ukukhanya?
Yini isichazamazwi isipelingi kwi "Umhubhe"?
Isikhalazo usizo kwisichazamazwi isipelingi, ubona okulandelayo: "Umhubhe" futhi "Umhubhe" kulotshwe izichazamazwi nama ekukhethweni zazo ukuba asebenzise igama elifanayo, nganoma iyiphi indlela, kuba ngokubhala.
Khona-ke kungani nalapho ukungavumelani usephendukele? Nokho sokupeleta "Umhubhe" noma "umgodi"?
Umehluko isipelingi yokubiza igama elithi "Umhubhe" futhi "Umhubhe" kubangelwa ithonya izilimi zakwamanye amazwe: isiFulentshi, isiNgisi, isiJalimane. Ifomu elithi "Umhubhe" lisuselwe kwelesiLatini elithi ngesiNgisi "Umhubhe", okuyinto elihunyushwe ngokuthi "umgqomo". Kamuva elithi yabekwa ithonya isiFulentshi, futhi umphumela waba ukuthi ithole enesiphetho esithambile "eh", okungukuthi, kusobala ukuthi ukhetho lesifanele kakhulu - a "Umhubhe". Nakuba kukhona iqiniso elithakazelisayo: ekuqaleni ngesiNgisi "Umhubhe 'yavela Old French, okwakuthatha ngendlela elithi" Tonnelle "futhi ngokoqobo ihumusha ngokuthi" bochechka Keg ".
Nokho kusele isikhashana "Umhubhe" noma "umgodi" - kanjani ukubhala athi leli gama?
Cabanga izwi kubolekwe, futhi lokhu wachaza ukuguqulwa kwakhe, ngakho isiRashiya kukhona "Umhubhe" futhi "Umhubhe". Phela, ukushintshwa kwamagama angaphandle esikhundleni samagama athile izinhlamvu ngakolunye, njengoba kwenzeka ngegama elithi. Lapho awela isiRashiya, kuzwakala sengathi "Umhubhe." Okungukuthi, kuvela ukuthi kuba ifomu amadala izwi. Futhi yolimi lwanamuhla Russian kuyadingeka ukubhala bese uthi "Umhubhe", kodwa akungqubuzani, futhi yehlile. Yingakho kukhona izinhlobo ezimbili izwi.
Kukhona "Umhubhe" Esinye isici. Kungakhathaliseki ukuthi yini eyayingalungile asetshenziswa ekubhaleni izwi - by O noma Y, ezimweni zombili kufanele kubhalwe kabili H ncwadi ngesisekelo izwi. Futhi ngokusho izibalo, okuyimali "Umhubhe" lisetshenziswa kaningi ukudlula "Umhubhe."
Futhi eqinisweni, lokho kuyinto "Umhubhe"?
Lapha kubalulekile ukuphawula le Umhubhe omude kunayo yonke emhlabeni, esemgwaqweni iNyakatho-Ntshonalanga of England. Ubude izakhiwo - ayizinkulungwane 154 metres, yakhelwe amanzi, kodwa engavamile yayo ukuthi ihlukaniswe yaba izingxenye, nakuba ngoba kunesithembiso isihloko "Umhubhe omude kunayo yonke emhlabeni."
Futhi "Umhubhe" futhi "Umhubhe" kusho into efanayo, okungukuthi komhlaba isakhiwo side, okuyinto badedele, ujantshi, zokuxhumana, umnotho ezisemadolobheni, nobude lesi sakhiwo uphakeme ngaphezu ubude balo nobubanzi.
Ukubhoboza - emhubheni futhi?
Ingasaphathwa futhi mayelana enjalo izinto ezithakazelisayo njengoba imigudu (noma imigudu) ezindlebeni, okuyinto angagcini umhlobiso ukuze ngokwethukela, kodwa kancane kancane kuyanda ku dandies impikiswano futhi izintokazi. Kuyini ephawulekayo: nakakhuluma ngetheksthi emigodini izindlebe, imithombo ezivame kakhulu kukho "Imigudu".
Uyini "indlebe Umhubhe"? Imiphumela inqubo enjalo,
Wathi nomhlobiso yinqubo ye esisuka yendlebe ethambile, lapho kubonakala ububanzi emgodini phakathi no ezinhlanu ngamasentimitha. Ngokuvamile basebenzisa metal imigudu ukuthi naadevayutsya njengoba inkinobho, bese uvula imbobo indlebe into nenhle esizoheha a lot of ukunakwa.
Lokhu imfashini indlebe Imigudu uvela izizwe yeKenya Indonesian, lapho ingxenye yendlebe ethambile kunqunywa militancy kanye virility zabantu, kanye nobuhle kwabesifazane. Futhi kulezi zizwe Imigudu ezindlebeni emaphaketheni wadlala indima, njengoba laba bantu musa ukugqoka izingubo.
umhlobiso kubhekwe uhlobo ukubhoboza umzimba. Ngokwesibonelo, e-America, wayengumuntu ethandwa kakhulu iminyaka engu-70 nge abaculi, abaculi kanye nezinye ngabanye zokudala. Ezweni lethu, indlebe Imigudu vogue muva. Yiqiniso, kubonakala olubabazeka kakhulu, okuthusayo ngisho kakhulu, kodwa fashion ivame ukuba zenzeke, futhi akukho ngokuqiniseka ukuthi kuyoba ebalulekile eminyakeni embalwa. Futhi kusukela Imigudu indlebe akulula ngakho ukuqeda, akusiwona amacici evamile, ukuthi ngeke ukwazi ukugqoka, futhi ekugcineni imbobo encane ukuphulukisa futhi kuyoba khona noluncane umhlobiso. Kodwa lo mhubhe endlebeni, ububanzi okuyinto kwafinyelela okungenani oyedwa isentimitha, ukuphila izohamba isibazi.
Uma Nokho, ukuxazululwa ku mhubhe, kuzomele uqale unqume ngokuthi lingakanani kanye indlela ngokubulawa. Lapha-ke kufanele kuqashelwe ukuthi le nhlobo ukwenza Imigudu ezindlebeni wena njengomphathi isengozini enkulu yokutheleleka ngegciwane. Okwamanje, imigudu ukwenza noma yikuphi emakhazeni pirsing- noma umbhalo. Kukhona izindlela ukwenza Imigudu: indlela yokuqala kancane izimbobo esisuka ku ingxenye yendlebe ethambile usayizi oyifunayo. Indlela yesibili - ngokwedlulele kunazo, ke uyabulawa esimweni lapho umuntu uyazi ukuthi ubukhulu afuna mhubhe, futhi lokhu kumele kwenziwe ngokushesha. Inketho yesithathu - ayingozi kakhulu, kwenziwa izinzwa, kanye nommese ukuze usike imbobo Lobe we ubukhulu kwesokudla. Lapho i operation ezifana igebe ingozi Lobe, ngakho-ke kwenziwa kuphela nokucwala ezikhethekile.
Yini elindele Mods emva inqubo enjalo? Inkinga esivame kakhulu - ukubola ngaphakathi emhubheni, sepsis izinhlungu, ukulunywa, futhi akungenxa ukuhlukumeza izidingo yokuhlanzeka phakathi naleyo nqubo, kungaba isici i umzimba. Ngakho-ke, ngaphambi kokwenza isinqumo ku ukusungulwa emhubheni endlebeni kufanele kudokotela.
"Malume Remus", indaba okuqukethwe okufutshane
Savanna sezulu, ke sibonisa flora ehlukile nezilwane
Isikhundla Geographical kanye nesimo Afrika. Njengoba Afrika yilona zwekazi maqondana nezinye amazwekazi?
Strollers Baby Care - ukuthuthwa ephelele zengane
Imiyalelo kanjani ukumisa WiFi ngaphandle kokushayela onguchwepheshe.